Tsiniya - akuyona nje imbali. Lena ngempela ubuhle ongavamile zalesi sihlahla, ngokoqobo bewitching ukubukeka inhlanganisela enhle kokuvamile spectrum ocebile imibala egqamile ukuthi sikhulu ehlotshisiwe ensimini kusihlwa ngokuphola ihlobo noma ekwindla tsiniya efiselekayo ikakhulukazi ensimini, ngoba revitalizes zibuthuntu ukuwa imibala, edlulisela ehlobo libalele. Yilokho imbali enjalo amahle oyifunayo - tsiniya Imbewu ingatholakala izimbali kanye indawo yayo yokugcina kanye izithombo.
Kungenzeka zokutshala zinnias ngasekuqaleni naphakathi no-Kwangathi okulungile ekhanyayo, kodwa qiniseka ukusebenzisa impahla nezambatho.
Ngokuvamile on the Flower-abathandi izindawo ihlangabezana tsiniya ngomusa. Kuyinto esimila yonyaka umane emangalisa ubuhle, lafinyelela ukuphakama 20 amasentimitha ukuba imitha elilodwa. Sifanamsindvo kuthiwa yimani niqonde izitshalo ekhelini, amaqabunga amakhulu kanye anolaka. Izimbali zibuthelelwe inflorescences e amaqoma, ukufinyelela 16 amasentimitha ububanzi, nenhle kakhulu, imibala egqamile ahlukahlukene. Zinnias beze terry, lulwimi double noma bushelelezi.
It is in umkhuba horticultural eyaziwa, futhi kolunye uhlobo zalesi sitshalo - tsiniya angustifolia. Kubukeka ezahlukene kakhulu ukwedlula tsiniya ngomusa. Angustifolia tsiniya ongaphakeme, ifinyelela ngamasentimitha 35 kuphela, alo kakhulu branched sifanamsindvo ukuqala kakade kusukela phansi ukwakha sezihlahla zokuqala eyindilinga.
inflorescences Esincane enezicabha zinnias futhi akuzona njengoba esikhulu ukufinyelela ngamasentimitha amane kuya kwayisithupha ububanzi kuphela. Umbala ubuye ngempela elikhanyayo, ngezinye izikhathi kakhulu impela kube yinqaba, kuvuse ezimbili ithoni, kungenzeka imibala elise kwesokudla izindandatho, izindawo noma emaphethelweni.
Ukuthandwa imbali kungavimbela ngisho Iqiniso elibuhlungu ukuthi tsiniya besaba khona kubanda. Yiqiniso, tsiniya yisithombo ezikhulayo okuyinto kwakulandelwa ukuqina, zezitsha encane, degree elilodwa ngaphansi kwezingaqhwa, isithwathwa, izithombo kanye nezitshalo omdala izimbali, kodwa ezwelayo frost imbali ungeme. Kodwa sengathi isinxephezeliso lokhu kuntuleka tsiniya kakhulu nesomiso ukumelana.
Le mbali enhle uchazwa ngokuthi dolgotsvetuschy. Bloom ezihlabayo eduze ekupheleni kukaJuni futhi liyaqhubeka ukuqhakaza kuze frost, ukuhlobisa ingadi isikhathi eside. Kubonakala kuhle imbali ku afanayo namaqembu, kahle emikhulu ubuciko kanye nemingcele. Abalimi abaningi basebenzisa zokutshala e Alpine amagquma.
Imbali tsiniya ezikhulayo izithombo ngendlela elandelayo. Okokuqala seeded zinnias. Lokhu kwenziwa ekuqaleni Apreli kule abamba ukushisa, kungenzeka futhi zokugcina. Ngaphansi kwezimo ezivamile, izithombo avele esingangesonto emva kokutshala.
Ngemva cishe kwesonto nesigamu eyenziwa Pick, okwathi ngemva kwalokho ziintjalo zalisa, usebenzisa umquba eziyinkimbinkimbi. Lokhu Umanyolo kufanele liphindwe izikhathi ezimbalwa ngaphezulu ngaphambi zitshala endaweni unomphela ke lesi sitshalo izobukeka ngesikhathi kokufika njengomuntu tsiniya yangempela yisithombo ukutshala iphelile.
Zokulala yisithombo lukhuni sezivuma ngokushesha ngemva frost. Tsiniyu ngomusa itshalwe at ibanga 30-35 cm phakathi kwezitshalo kanye angustifolia tsiniya njengoba kancane esikhulu, bazizwa okuhle futhi eduze kakhudlwana - ibanga phakathi sezihlahla 20-25 amasentimitha kwanele.
Inhlabathi yokutshala imbali tsiniya ezikhulayo izithombo eyayintula enzima eziningana okufanele bacebe nomsoco kanye abe yokusabela hlangothi. Uzungu okokuqala kudingeka ukumba umthombo, engeza humus, umquba noma leaf umhlabathi emhlabeni ibhakede ngamunye imitha square. Kungenzeka ukwengeza enye isipuni nitrophosphate, potassium sulphate kanye superphosphate. Ngemuva kokufaka isicelo umquba engajulile bemba futhi.
Land for zinnias ezikhulayo kumele kahle ovuthayo kanye evikelekile emoyeni. waterlogging nhlobo noma, kunalokho, esadonsa isikhathi eside. izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesikhathi sonyaka izitshalo kufanele ukusuthiswa manyolo organic nokumbiwa.
Nokho, yilokho kuphela. Uma ukufeza zonke lokho kudinga ukuba lesi sitshalo esimangalisayo ukuthi le mbali uyosivuza ngokugcwele ukuthi tsiniya kusuka imbewu noma esekhulile ngokusebenzisa izithombo.
Okunethezeka amaholide e Mauritius